Sida laga soo xigtay Prosser; Dhacdada Apple bishii Maarso 2021: AirPods Studio | Waxaan ka socdaa mac
Sida laga soo xigtay Prosser; Dhacdooyinka Apple bishii Maarso 2021: AirPods Studio
Kaliya maahan L0vetodream inay ku dhiirato inay soo bandhigto fikradahooda ama astaamo bidix iyo midig. Jon Prosser ma doonayo inuu lumiyo xarigga wuxuuna u baahan yahay in xoogaa la dhageysto. Dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee Apple, gaar ahaan dhacdadii Sebtember 15, oo lagu soo bandhigay Apple Watch Series 6, Apple Watch SE, iPad Air iyo iPad kii ugu dambeeyay, iyo Apple One iyo sidoo kale xirmada cusub ee adeegyada Apple si sax ah uma ahayn xaq la saadaasheeda. Laakiin sii wad isku dayga. Kuwa soo socdaa waa Maarso 2021: Studio-ka AirPods
Ma jiraan wax intaa ka badan oo aan ka yarayn Maarso 2021: AirPods Studio. Waxaan ka hadleynaa inay weli harsan yihiin shan bilood iyo dadaal wanaagsan oo Jon ah oo la yiraahdo, kaliya maahan inay jiri doonto dhacdo Apple ah taariikhdaas laakiin sidoo kale in qalab cusub oo shirkadda ah la soo bandhigi doono. Xitaa wuxuu ku dhiiran karaa inuu sheego taariikhda, Maarso 16, Talaado. Maaha isbedelka mid horey loo aasaasay, haddii uusan ahayn qalab cusub oo u imanaya inuu qabsado boos banaan. Dhagaha dhagaha dhagaha leh ee dhamaadka sare.
Rikoodh ahaan, macallinkaan ayaan ahayn markii ugu horreysay ee uu ka digayo inay dhacdo dhici doonto bisha Maarso. Waxaad horey noogu soo sheegtey in bishaas, Apple wuxuu soo bandhigi lahaa Airtags. Sida had iyo jeer la sameeyo, ku horumarinaya iyada oo loo marayo Twitter iyo tan mid ka mid ah tags-ka GPS-ka, wuxuu horeyba u sheegay isagoo xusay inaan la soo bandhigi doonin dhacdadii Oktoobar.
Hadda waad diyaarin kartaa keydka ama wax yar u keydin kartaa si aad u awoodo inaad iibsato mid ka mid ah labada moodel ee lagu xamanayo inay ka soo baxayaan Studio-ka AirPods (Sport iyo Premium) oo aad dhigto calaamadda AirTag haddii ay lumaan, inay noqdaan awood u leh inay ku helaan meel si dhakhso leh oo ammaan ah. Aad uma adkaan doonto in la xaqiijiyo run ahaanshaha ereyadan, maxaa yeelay markay taariikhdu soo dhowaato, xanta ayaa sii kordheysa waana ku celcelineynaa iyaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Sida laga soo xigtay Prosser; Dhacdooyinka Apple bishii Maarso 2021: AirPods Studio
Podcast iyo Apple Music waxay si aan kala go 'lahayn ugu dhex milmayaan Porsche Taycan
Apple's MagSafe oo loogu talagalay gawaarida korontada ku shaqeeya